Jona sy Jolay, Manamarika ny Tsingerintaonan’ny Fandrotehan’ny Ady Ireo Tanàna tao Japàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2017 7:30 GMT
Ny tanàna tao amin'ny faritr'i Shizuoka taorian'ny nandoroan'ny baomba azy ny 18 Jona 1945. Sary an'i Hidenori Watanave.
Ho an'i Japàna, ireo volana amin'ny lohataona dia fotoan'ny fandinihana lalina. Isaky ny Aogositra no marihana ny O-Bon, ilay fetibe isantaona hankalazàna ny maty, fotoana lazaina fa itsidihan'ireo havan-tsy foy efa nodimandry ny tranon-drazany rehefa tapatapaky ny volana iny, alohan'ny hiverenany ho any amin'ny fiainan-tsy hita indray. Fa fitsingerenan'ny daroka baomba atomika tao Hiroshima sy Nagasaki ihany koa ny Aogositra, ary hatramin'ny filavoan'i Japàna lefona tamin'ny 1945 sy ny fiafaràn'ny Ady Lehibe Faharoa.
Ny fandarohana baomba an'i Hiroshima, sy, raha amin'ny sehatra kelikely kokoa, Nagasaki, izay niteraka ny faharavàn'ireo tanàna roa ireo ary nahafatesana olona an'aliny maro, dia fantatra tsara any ivelan'i Japàna. Fa ny tsy dia be mpahafantatra dia ny fampielezankevitra tsara rindra natao nandritry ny volana maro mba handarohana baomba, nitarika nankany amin'ny fanaparitahana ireo fitaovampiadiana nokleary sy ny fiafaràn'ny ady, izay namotika efa ho ny tanàna rehetra tao Japàna mihitsy.
Tamin'ny fanombohana ny fandoroana an'i Tokyo tamin'ny baomba tamin'ny Martsa 1945 — ilay fanafihana an'habakabaka faran'izay nandravarava indrindra tamin'ilay ady — daroka baomba nitohy hikendrena an'ireo tanàna ao Japàna ho fandravàna tanteraka sy manontolo tamin'ny Jona sy Jolay 1945. Ilay Japoney mpikaroka, Hidenori Watanave, izay mahay manokana momba ny teknolojian'ny fandraketana an-tsarintany ety anaty aterineto, dia nampakatra sary miloko tao amin'ny Twitter momba ireo daroka baomba.
Tamin'io andro io, 72 taona lasa izay: ny 22 Jona 1945, nitranga ilay fanafihana an'habakabaka tampoka tao Himeji. Tokony ho tamin'ny 9:50, 60 ireo fiaramanidina B-29 mpandaroka baomba no nipoitra avy any, nikendry tamin'ny baomba nandritry ny ora iray teo ho eo ny orinasa Kawanishi mpanamboatra faramanidina tao Himjeji. 341 ny olona maty, ary 10.220 no tsy nanana hialofana. Sary voaloko tamin'ny alàlan'ny “neural network”.
Fitaovana ety anaty tranonkala no nampiasain'i Watanave handokoana ireo sary mainty sy fotsy, ary matetika mikaroka sary momba ireo daroka baomba avy ao amin'ny JapanAirRaids.org, tahiry dizitaly natokana ho an'ny fanapariahana vaovao iraisampirenana momba ireo fanafihana an'habakabaka tany Japàna nataon'ny Tafika An'Habakabaka sy an-dRanomasina Amerikana.
‘Tokyo – ny maraina taorian'izay!’ Loharano: Tranombokin'ny Kaongresy, ireo Taratasin'i Curtis LeMay, Tatitry ny Air Intelligence, Vol. 1, No. 2. ary ny Gazetin'ny Jeografia ara-Tantara, ‘Sarintany iray vasoka mainty : fametrahana ho an-tsarintany ny fandravàna tanàndehibe tao Japàna nandritry ny Ady Lehibe Faharoa.‘
Tombanana ho nahafatesana olona 333.000 ary nandratràna sivily 473.000 ilay fandravàna tsara rindra nanjo an'ireo tanàna tao Japàna, miaraka amin'ireo tombanana ho 15 tapitrsa lasa tsy nanana hialofana.
Tamin'io andro io, 72 taona lasa izay: ny marainan'ny 22 Jona 1945, nipoaka ny fanafihana an'habakabaka ny Kure Naval Yard. Niisa 162 ireo fiaramanidina B-29 mpandaroka baomba nandatsaka baomba niisa 1.289 ny fitambarany tao amin'ilay fotodrafitrasa. Maty noho ny baomba tsy mipoaka eo noho eo nalatsaka tamin'io fanafihana an'habakabaka io i Harumi, mpilalao ao anatin'ilay sarimihetsika  mitondra lohateny hoe ‘aty amin'ity Zoron'Izao Tontolo Izao Ity‘.
72 taona androany: voatafika i Kure.
Ny seranantsambon'i Kure, taorian'ilay fanafihana an'habakabaka.
72 taona androany: nirehitra i Shizuoka nandritry ny fanafihana an'habakabaka iray.
72 taona androany: ilay Fanafihana an'Habakabaka Goavana tao Shizuoka. Ny alimbe tamin'ny 19 Jona hatramin'ny mangiran-dratsin'ny 20 Jona, niisa 137 ireo B-29 mpandaroka baomba no nanafika ilay tanàna afovoan'i Shizuoka. 1.952 no maty, ary naherin'ny 5.000 no naratra. Trano 26.891 no ravan'ny afo.
Tamin'io andro io, 72 taona lasa izay: ny Fanafihana Goavana an'Habakabaka ny tao Fukuoka, 19 sy 20 Jona, andro nanafihana ny tanàna afovoan'i Fukuoka. Niteraka fahafatesana 1.000 sy fanjavonana olona io fanafihana io.
Tamin'io andro io, 72 taona lasa izay: Voadaroka baomba i Hamamatsu (ao amin'ny prefektioran'i Shizuoka ) sy Yokkaichi (ao akaikin'i Mie). Tao Hamamatsu, 1.720 ireo olona maty, 15.400 ny trano rava. Tao Yokkaichi, 736 ny olona maty, 1.500 no naratra ary 63 tsy hita popoka. 47.153 no isan'ny olona nafindra toerana ary 11.390 ny trano rava. Sarin'i Hamamatsu ity saripika ity.
72 taona androany, rava taorian'ny daroka baomba ny afovoan-tanànan'i Hamamatsu.
72 taona androany: ny 17 Jona 1945, nipoaka ny fanafihana Goavana an'Habakabaka tao Kagoshima. Kinendry tamin'ny daroka baomba mandoro ny tanàna manontolo, namela 3.500 naratra ary 2.316 namoy ny ainy.
Kagoshima sy Taramizu mpifanila vodirindrina aminy voadaroka baomba.
Mba handokoana ireo saripika, dia niankina tamin'ny tetikasa ety anaty aterineto an'ny Anjerimanontolon'i Waseda i Watanave, tetikasa antsona hoe Fandokoana Mibaiko Tena amin'ny Alàlan'ny Tambajotra “Neural”. Rafitra solosaina maro ny tambajotra “Neural”, izay miasa amin'ny fomba mitovitovy amin'ny atidohan'ny olombelona.
Efa nampiasa ilay fitaovana i Watanave taminà tetikasa maro natokana hitehirizana sy hametrahana an-tsarintany ireo fijoroana vavolombelona tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, isan'izany ny sarintany iray azo tetezina mitantara ny daroka baomba atomika tao Hiroshima sy Nagasaki, ary ny Ady tao Okinawa tamin'ny 1945. Watanave ihany koa no mpamorona ilay tetikasa fametrahana an-tsarintany misy asa famoronana mitovitovy amin'io izay mitrandraka ireo fotoana farany niainan'ireo trà-doza tamin'ilay Horohorontany sy onja mahery (tsunami) tao Japàna tamin'ny Martsa 2011.
Azon'ny rehetra ampiasaina ato ilay fitaovana Fandokoana Mibaiko Tena amin'ny Alàlan'ny Tambajotra “Neural” ao amin'ny Anjerimanontolo ao Waseda.